Torohevitra momba ny fampiasana telefaona finday sy finday-Vaovao-Yuyao Xianglong Communication Industrial Co., Ltd.
Torohevitra momba ny fampiasana telefaona finday sy finday
Fotoana: 2020-06-09 Hits: 10
Ny halaviran'ny halavirana sy ny saram-piainana eo an-toerana payphones ary telefaona hafa any amin'ny faritra ho an'ny daholobe toa ny hotely, hopitaly ary seranam-piaramanidina dia afaka miovaova, ary mety ho mahagaga loatra. Alohan'ny hampiasanao telefaona na finday dia fantaro izay ho tohiny.
1.Hendry hendry: fantaro ny zonao
Ny FCC, miaraka amin'ireo fanjakana dia miaro ny mpanjifa mampiasa telefaona sy finday misy fitsipika mifehy:
Antso vonjy maika: Ny mpanome serivisy mpikarakara dia tsy maintsy mampifandray antso 911 eo noho eo.
TRS: Ny antso an-toerana an-tariby momba ny serivisy momba ny fifandraisan-davitra momba ny fifandraisan-davitra - serivisy ahafahana miantso ny olona na marenina, zara raha mihaino na tsy mahay mandaha-teny - tsy andoavambola amin'ny finday.
Miantso manodidina: Azonao atao ny mametraka antso amin'ny finday na telefaona finday amin'ny alàlan'ny orinasa lavitra ny safidinao amin'ny alàlan'ny fampiasana kaody fidirana mba “hiantso manodidina” ny payphone na mpanome tolotra finday ho an'ny daholobe. Ny antso an-tariby dia mety midika fa ny laharana an-tariby 800, isa eo an-toerana izay manomboka amin'ny 950, na laharana fidirana fito isa izay fantatra amin'ny anarana hoe 101-XXXX na 10 10 XXX. Ny lalàna federaly dia mandrara ny fanakatonana ireo isa miditra amin'ireo orinasam-pifandraisana lavitra amin'ny telefaona finday.
Tsy nifandray: Ny mpamatsy serivisy dia tsy afaka mandoa vola ho an'ny antso tsy voavaly.
Vidiny eo an-toerana: Ny fanjakana maro dia manohy mifehy ny salan'isa ho an'ny antso an-toerana. Hamarino amin'ny vaomiera fampiasambolam-panjakana na orinasa an-telefaona eo an-toerana.
Fampahalalana momba ny serivisy: Ny mpanome an-tariby no tsy maintsy mametraka mivantana amin'ny telefaona na isaky ny telefaona ny anarana, adiresy ary laharam-pahavoazana an'ny mpamatsy tolotra.
Antso maimaimpoana: Ireo antso ho an'ny isa maimaimpoana, anisan'izany ny antso voantso amin'ny karatra fiantsoana karatra na carte de crédit dia tsy mitaky vola madinika. Afaka tonga any amin'ny mpandraharaha iray ianao nefa tsy manisy vola.
Henoy aorian'ny antsoinao ny isa itadiavanao mba hahafantarana hoe iza no mpamatsy serivisy miandraikitra ny anjaranao. Ny mpanome tolotra dia tsy maintsy mamantatra ny momba anao eo am-piandohan'ny fiantsoana alohan'ny hifandraisana sy manome volavolan-dalàna. Holazaina aminao ny fomba hianaranao ny fitambaran'ny vidin'ny antso an-tariby - tafiditra ao anatin'izany ny fidirana rehetra - amin'ny alàlan'ny fanerena mihoatra ny 2 isa, na amin'ny fijanonana eny an-dàlana.
Raha tsy mampiasa vola handoa vola ianao, ny mpiasan'ny serivisy dia mitaky anao handoa ilay antso amin'ny karatra fiantsoana na carte de crédit, antso manangona na handoa ny antso amin'ny antoko fahatelo.
Ny orinasam-pifandraisana XiangLong dia manolotra karazan-kalitao avoakan'ny kalitao avo lenta, tsy fahampian-drano ary tsy ahitam-bokatra finday findays sy keypads. Ny kitapo rehetra dia vita amin'ny fitaovana maharitra PC / ABS. Ireo keypads rehetra dia vita amin'ny Stainless vy or zinc alloy. Ny bokotra fitodihana, ny làlam-pandaharana sy ny lamina dia azo zahana araka ny takian'ny mpanjifa.
Taloha: 4x4 Metal Keypad Installed in Tiffany & Co. Vending Machine in London
Next: Milina Keypad napetraka ao amin'ny Kiosk serivisy any Danemark